Fiaramanidina fiaramanidina: inona izany, inona izany ary ahoana no fomba famelomana sy famonoan-tena - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 30/05/2022 08:27 | Nohavaozina amin'ny 31/05/2022 08:34 | fikarakarana
Amin'ny ankapobeny, tsaroantsika ny fomba fiaramanidina rehefa mandeha fiaramanidina isika satria fantatsika fa, mandritra ny sidina, tsy maintsy manapaka ny finday na mametraka azy, araka ny lazain'izy ireo amintsika momba ny rafi-pitenenana ho an'ny daholobe, ny "mode fiaramanidina".
Fa inona marina izany? Inona no anton'izany? Ahoana ny fomba fitafy sy esorinao? Misy fika ve amin'ny fampiasana azy? Raha manontany tena koa ianao dia hovalianay daholo izany.
1 Inona no atao hoe fiaramanidina mode
2 Inona no ampiasaina amin'ny fomba fiaramanidina?
2.1 matory tsara kokoa
2.2 Mitsitsia bateria
2.3 Manorata amin'ny WhatsApp tsy hita
2.4 Avereno indray ny fifandraisana
3 Ahoana ny fomba hamonoana sy hamonoana ny maody fiaramanidina
3.1 Alefaso sy vonoy amin'ny Android
3.2 Alefaso sy vonoy ny iPhone
3.3 Ampidiro sy esory amin'ny solosaina
Inona no atao hoe fiaramanidina mode
Ny maodely fiaramanidina dia toe-javatra misy anao amin'ny findainao, na dia eo amin'ny takelaka, solosaina finday, solosaina... Ny tanjon'izany dia ny hanapaka ny fifandraisana tsy misy tariby, na Wi-Fi, angon-drakitra an-telefaona, famantarana antso na hafatra na Bluetooth aza.
Midika izany fa tsy azo ampiasaina mihitsy ny finday, satria tsy afaka miantso na mandray antso ianao, na SMS ary tsy mandeha ny fampiharana. Ireo izay tsy mampiasa Internet ihany no afaka miasa, fa ny ambiny kosa dia haato mandra-pahafaty ity fomba ity.
Ny anton'ny niantsoana azy io dia noho ny fandrarana efa nisy taona maro lasa izay izay rehefa mandeha fiaramanidina ianao dia tsy afaka mampiasa ny findainao sy ny mpanamboatra anao, amin'ny tanjona tsy hamono ny finday, dia nanamboatra an'io toerana io izy ireo.
Na dia amin'izao fotoana izao aza dia fantatra fa tsy misy zavatra mitranga amin'ny tsy fampandehanana azy amin'ny sidina, mbola manoro izany izy ireo, ary manery mihitsy aza. Na izany aza, nanomboka tamin'ny taona 2014 dia azo alefa tsy misy fampahavitrihana azy (navelan'ny EASA na ny Vaomiera Eoropeana). Ataovy ao an-tsaina fa, na dia eo aza izany fahafahana izany, dia ny zotram-piaramanidina no manana ny teny farany momba izay azo atao sy tsy azo atao amin'ny sidina.
Inona no ampiasaina amin'ny fomba fiaramanidina?
Azo antoka fa efa nampiasa fomba fiaramanidina ianao tamin'ny fotoana iray, fa tsy hoe manidina. Ary izany, na dia io aza no tena fampiasany, dia tena misy fampiasana bebe kokoa isan'andro. Ny sasany amin'ireo mahazatra indrindra dia ireto manaraka ireto:
Raha mitadidy fa mihamitombo hatrany amin'ny fitaovana isika (finday, tablette, solosaina), ny vatantsika dia mamaly izay feo avy aminy, hatreo amin’ny fifohazana amin’ny misasak’alina vao hahalala izay tonga.
Ary manimba ny torimasontsika izany.
Noho izany, Ny fampiasana ny maody fiaramanidina dia fomba iray hampiatoana ny finday nefa tsy voatery hamono azy ary mamela anao hanana ora vitsivitsy fitoniana sy fitsaharana izay hisaorana ny vatanao.
Fampiasana mahazatra hafa amin'ny maody fiaramanidina dia ny mitsitsy bateria. Ny fananana Internet, bluetooth, ary fifandraisana maro hafa misokatra tsy tapaka dia fantatra fa mandany bateria. Raha kely sisa tavela, Ny fampahavitrihana azy dia afaka manampy anao hihazona azy, na dia misy olana aza izany ary izany dia ny handao ny telefaona raha tsy misy ny fifandraisana..
Ny zavatra tsy dia lehibe loatra dia ny fanesorana ny angon-drakitra sy ny WiFi mba tsy hifandraisany.
Manorata amin'ny WhatsApp tsy hita
Ity angamba no iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, ary Izy io dia ahitana ny fampandehanana ny maody fiaramanidina ahafahana mahita ny fanjakana na mamaly hafatra tsy misy ny "sneak" miseho. 'Manoratra' rehefa mamaly isika.
Midika izany fa afaka maka fotoana hamaly ianao, na maka fotoana fotsiny amin'ny fampiharana nefa tsy mahazo hafatra.
Avereno indray ny fifandraisana
Fampiasana tsy dia fantatra loatra, fa tena mandaitra rehefa miteraka olana ny fifandraisana amin'ny findainao (tsy manana signal ianao, tapaka izy io, tsy maheno tsara, sns.). Raha mitranga izany, mbaAfaka manampy amin'ny famerenana ny fampandehanana ny maody fiaramanidina ao anatin'ny dimy minitra ary avereno indray ny fifandraisana.
Amin'ny tranga maro dia manampy amin'ny famahana ny olana izany.
Ahoana ny fomba hamonoana sy hamonoana ny maody fiaramanidina
Rehefa mahafantatra bebe kokoa momba ny maody fiaramanidina ianao dia izao no fotoana hahafantaranao ny fomba fampahavitrihana sy famonoana azy amin'ny findainao, na Android na iPhone.
Ny marina dia tena mora izany satria matetika amin'ny fanaraha-maso haingana ny telefaona. Fa raha mbola tsy nila izany ianao taloha ary tsy fantatrao hoe aiza no misy azy dia ataonay mora aminao izany.
Alefaso sy vonoy amin'ny Android
Manomboka amin'ny finday Android isika. Ny marina dia misy fomba maromaro ahafahana mampandeha azy (ary noho izany dia manafoana azy) ka manana safidy ianao:
Mampiasa ny bokotra off. Misy telefaona izay rehefa manindry sy mihazona ny bokotra herinaratra ianao dia manome sakafo kely alohan'ny hamonoana tanteraka, ny iray amin'ireo bokotra dia an'ny fiaramanidina. Izany no fomba fiaramanidina ary amin'ny tsindry iray dia azonao atao ny manetsika azy (ary manafoana azy mitovy).
Ao amin'ny fikirana Android. Raha miditra amin'ny bokotra Settings amin'ny findainao ianao, dia mety manana motera fikarohana ianao, hikaroka azy raha tsy tonga izany. Saingy amin'ny ankapobeny dia hiseho izany: eo an-tampon'ny menu na amin'ny tambajotra WiFi sy finday. Tsy maintsy manetsika azy fotsiny ianao dia izay.
ao amin'ny bara fampahafantarana. Raha ampidininao ny bara fampandrenesana (esorinao avy any ambony ka hatrany ambany ny rantsan-tànanao) ary eo, amin'ny fanaraha-maso ny fidirana haingana, dia hanana ny bokotra kisary amin'ny fiaramanidina ianao mba hampavitrika (na hanafoana) azy.
Alefaso sy vonoy ny iPhone
Raha toa ka iPhone ny findainao dia tokony ho fantatrao fa saika ho hitanao fa mitovy amin'ny amin'ny Android izany, izany hoe:
Ao amin'ny menio firafitry ny findainao, na eo am-piandohana na mijery WiFi sy fifandraisana.
Ao amin'ny foibe fanaraha-maso ny iPhone.
Ampidiro sy esory amin'ny solosaina
Talohan'ny nanehoantsika hevitra fa maro ny solosaina finday sy solosaina manana bokotra mode fiaramanidina. Raha ny solosaina tilikambo dia tena tsy fahita firy ny fampiasana, ankoatra ny famerenana ny fifandraisana anananao, fa amin'ny solosaina finday dia azo ampiasaina bebe kokoa, indrindra raha mandehandeha sy miara-miasa aminy mandritra ny dia ianao.
Miankina amin'ny fampiasanao Windows, Linux na Mac ny fampahavitrihana sy ny famonoana azy amin'ny solosainao, fa amin'ny ankamaroan'izy ireo dia ho hitanao mora foana izany amin'ny alàlan'ny fitadiavana azy ao amin'ny motera fikarohana amin'ny menio lehibe na amin'ny fitadiavana kisary misy fiaramanidina (mitovy amin'ilay ao amin'ny findainao).
Mazava ho azy, tadidio ny manaisotra azy avy eo, raha tsy izany, na dia miezaka mafy toy inona aza ianao hifandray amin'ny tambajotra iray any aoriana, dia tsy hamela izany.
Araka ny hitanao, ny maody fiaramanidina, na dia natao ho an'ny fiaramanidina aza izy io tany am-boalohany, dia manana fampiasana betsaka kokoa izy amin'izao fotoana izao. Mila manome fahafahana fotsiny ianao ary manandrana. Tsy misy na inona na inona mitranga mandritra ny fotoana fohy raha tsy misy ny finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fikarakarana » Fiaramanidina fiaramanidina: inona izany, inona izany ary ny fomba famelomana sy famonoana azy